जिन्नी र जर्जिया - नेटफ्लिक्स श्रृंखलाको ठूलो सफलताको कारण बेजिया
नेटफ्लिक्समा 'जिन्नी र जर्जिया' श्रृंखलाको सफलताको कारण
सुसाना Godoy | 06/04/2021 14:00 | समाचार
केही हप्ता पहिले मात्र श्रृंखला 'जिन्नी र जर्जिया'। यद्यपि सायद सुरुमा यो एक सफलता बन्न को लागी एक महान मनपर्ने को रूप मा शुरू भएन, यो छ। धेरै छोटो समयमा यो प्लेटफर्ममा सबैभन्दा धेरै हेरिएको बीचमा स्थित छ।
तसर्थ, यो बन्न असंख्य brushstrokes छ तपाईंको नयाँ मनपर्ने श्रृंखला। तपाईंले यो देख्नु भएको छ? यदि हो भने, त्यसोभए तपाईंले राम्रोसँग थाहा पाउनुहुनेछ कि म के बारेमा कुरा गर्दैछु र यदि होईन, तपाईं अझै पनी फेला पार्न सक्नुहुन्छ र यसलाई प्रयास गर्नुहोस्। कथानकको लागि एक पागल शैली तर धेरै हुकहरू जुन हुकको साथ।
1 धेरै युवा आमाले आफ्ना बच्चाहरूसँगको सम्बन्ध
2 रहस्यको साथ एक आमा पछि कथा
3 किशोरावस्था र यसका समस्याहरू
4 'जिन्नी र जर्जिया' मा प्रेम सम्बन्ध
धेरै युवा आमाले आफ्ना बच्चाहरूसँगको सम्बन्ध
सच्चाइ यो हो आमा, जर्जिया, आफ्ना बच्चाहरू संगको सम्बन्ध एक यस्तो कुरा हो जुन पहिलो नजरमा उफ्रिन्छ। कुनै पनि आमा वा बुबाले जस्तै, उनी उनीहरूका लागि सबै दिन्छन् तर यो सत्य हो कि उनी एक कदम अगाडी जान्छन्। किनभने साथीहरूको सम्बन्ध जुन हामी सबै आफ्नी आमाहरू वा छोरीहरूसँग चाहन्छौं, अब जीवनमा देखिन्छ। यसबाहेक, कहिलेकाँही छोरीको निर्णयले वयस्कहरूलाई बढी असर गर्दछ, जब यो सामान्यतया विपरित हुन्छ। हामी मित्रता र पारिवारिक सम्बन्ध को मामला मा कुल स्वतन्त्रता पाउनुहुनेछ, केहि हामी पहिलो एपिसोड देखि हेर्न चाहान्छौं, यद्यपि यो सबै पनि विकसित हुनेछ। यस सम्बन्ध पछाडि अन्धकार र जटिल रहस्यहरु भन्दा बढि छन्।
रहस्यको साथ एक आमा पछि कथा
सबै कुराको मिलन बिन्दु हुन्छ र त्यसैले, आमा-छोरीको सम्बन्धमा पनि। यसको मतलब यो हो कि सम्बन्ध त्यस्तै छ भने, यो केहि लागि हुनेछ। हुनसक्छ आमाको छोरी एकदम कान्छी छिन, केहि परिवार नाटकहरूमा जाँदा जुन उनलाई बाटोमा हेरचाह गरिरहेका थिए। किनभने, जब छोरी गिन्नीले आफ्नो आमाले लुक्ने कुरा पत्ता लगाउँछिन्, उनीले उसलाई माफ गर्दिन वा यस्तो देखिन्छ। तर यो सत्य हो कि यसलाई बुझ्नको लागि अझ धेरै जान्नुपर्ने कुरा छ। रहस्य समय मा उफको रूप मा प्रकट हुनेछ। त्यसो भए यसरी हामी तर्कलाई अझ राम्रोसँग बुझ्न सक्दछौं।
किशोरावस्था र यसका समस्याहरू
आमा र छोरीबीचको रहस्य र सम्बन्धको अतिरिक्त नेटफ्लिक्स श्रृंखला 'गिन्नी र जर्जिया' मा पनि किशोर नाटकहरू प्रस्तुत गरिएको छ। पहिलो यौन सम्बन्ध, प्रेम कि आउँछ र साथ साथै मित्रताको मूल्य र केही विकारहरु। यस्तो देखिन्छ कि प्रतिस्पर्धा र परिपक्वता पनि पूर्ण रूपमा यस प्रकारको श्रृंखलामा टकराउँदछ। त्यसैले एक प्राथमिक यो एक युवा श्रृंखला को बारेमा राम्रोसँग बोल्न सकिन्छ, यद्यपि यस ठाउँमा यसले हामीले कल्पना गर्न भन्दा धेरै कभर गर्दछ। श्रृंखलाको अर्कोसँग केही समानताहरूको बारेमा चर्चा छ जुन केही समय अघि ठूलो सफलता थियो र 'गिलमोर गर्ल्स' बाहेक अरु कुनै होइन।.
'जिन्नी र जर्जिया' मा प्रेम सम्बन्ध
किनभने सबै जसो 'जिन्नी र जर्जिया' मा नाटक हुन गएको थिएन, यसले कमेडीको पनि स्पर्श गर्‍यो र विषयवस्तुहरू पनि मनपर्‍यो। आमा र छोरीको बीचमा हुने केही कुरा, अनिश्चित भविष्यको साथ। यद्यपि यो सत्य हो कि कहिलेकाँही हामी छोरीलाई आमाभन्दा धेरै परिपक्व छ भनेर सोध्न सक्छौं। प्रेममा खस्नुका साथै पहिलो यौन सम्बन्ध केहि मुख्य बुँदाहरू हुन्। शीर्षकहरू जुन पूर्ण स्वाभाविकताका साथ खेल्दछन् र यसले हामीलाई प्रत्येक चरित्रलाई अलि बढी बुझ्न मद्दत गर्दछ। त्यसोभए पहिलो मौसमको मजा लिइसकेपछि, सबैजनाले सोध्ने प्रश्न हो: के नेटफ्लिक्सले दोस्रो सत्रमा 'गिन्नी र जर्जिया' नवीकरण गर्नेछ? मलाई पक्का विश्वास छ कि यो सफलताको साथ आउँदैछ, हामी चाँडै नै केहि सकारात्मक चीज जान्ने छौ।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » समाचार » नेटफ्लिक्समा 'जिन्नी र जर्जिया' श्रृंखलाको सफलताको कारण